I-Dragonbox Pyra Pocket Linux PC Manje Iyatholakala | Kusuka kuLinux
I-Dragonbox Pyra Pocket Linux PC isiyatholakala
Ngemuva kokuthuthukiswa kweminyaka engaphezu kwengxenye eyishumi (Iminyaka engu-7 noma ngaphezulu), i-Dragonbox Pyra ekugcineni isilungile futhi isendleleni ezothunyelwa, ngokusho konjiniyela ohola iphrojekthi, uMichael Mrozek.
Futhi yilokho UMrozek ufake ezinye izibuyekezo kuTwitter ngo-Okthoba., bethi iqembu lihlanganisa amayunithi ePyra futhi lilungiselela ukuwathumela ezinsukwini ezimbalwa kumakhasimende a-ode ngaphambili.
Noma lokhu kuthathe okungaphezulu kwezinsuku ezimbalwa, kodwa uMrozek wamemezela ngasekupheleni kukaDisemba 2020 ukuthi amayunithi okuqala asekulungele ukuthunyelwa kumakhasimende abeke ama-oda wangaphambi kokuqala.
Amakhompyutha wokuqala we-DragonBox Pyra asebevele besenqubeni yomhlangano izinsuku ezimbalwa futhi seziqalile ukuthunyelwa kumakhasimende okuqala ngubani o-ode ngaphambilini. Kepha akucaci ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba yonke imiyalo yangaphambi kokuthunyelwa ithunyelwe futhi neqembu elingemuva kwePyra likulungele ukuqala ukuthunyelwa kwamayunithi ukuze lihlele kabusha amakhasimende.
Mayelana ne-Dragonbox Pyra
I-DragonBox Pyra Kuyinto ephathekayo enesikrini esingu-5 intshi, iprosesa ye-TI OMAP 5, iprosesa eyi-15GHz dual-core ARM Cortex-A1,5, kuze kufike ku-4GB RAM, 32GB eMMC storage, Ikhibhodi ye-QWERTY nabalawuli begeyimu abahlanganisiwe, Inesikrini sokuthinta esiphikisayo samaphikseli angama-720, kanye nesifundi sekhadi le-MicroSDXC.
Futhi isekela i-802.11n ne-Bluetooth 4.0 futhi inezipikha ze-stereo, i-headphone jack, i-micro USB port, ne-HDMI port. Kukhona nenguqulo ye- "Mobile Edition" yePyra enemodemu ye-3G / 4G.
I-DragonBox Pyra yakhelwe ukuthi ibe yithuluzi le-hardware elivulekile futhi esinye sezici ezinhle zale PC ephaketheni ukuthi ihamba nesifaki se-Debian Linux ngokuzenzakalela, noma ngabe le divayisi isebenza ngokuphelele nezinye izinhlelo zokusebenza.
Idivayisi yakhelwe njengeplatifomu evulekile engaguquguquka kalula ngakho-ke ingasetshenziswa njengekhompyutha yenhloso ejwayelekile yize ekuqaleni yayihloselwe njengomshini wokudlala ophathekayo.
Engxenyeni yemininingwane yale khompyutha ephaketheni:
I-SoC - iTexas Instruments OMAP 5432 SoC ene-2x Arm Cortex-A15 @ 1.5 GHz ene-NEON SIMD, 2x ARM Cortex-M4, Imagination Technologies PowerVR SGX544-MP2 3D GPU neVivante GC320 2D GPU
Imemori yesistimu: 4GB RAM
Isitoreji: 32GB eMMC flash, 2 SDXC card slots, 1 internal micro SDXC card slot
Khombisa: I-720p 5-inch LCD enesikrini sokuthinta esiphikisayo
Ukukhishwa kwevidiyo: I-Micro HDMI
I-Audio I / O: izipikha ezisezingeni eliphakeme, ukulawula ivolumu yedijithali, imbobo yekhanda, umbhobho owakhelwe ngaphakathi
Izilawuli zegeyimu: I-D-Pad, Izinkinobho ezi-4 eziseceleni, Izinkinobho ezi-6 zangaphambili, Izilawuli ezi-2 eziqondile ze-Digital Push Button
Ikhibhodi ebuyiselwe emuva ye-QWERTY
I-Wi-Fi 802.11 b / g / n nokuxhuma okubili kwe-band ne-Bluetooth 4.1.
Imodyuli engakhethwa ye-GPS ne-LTE
I-USB: Izimbobo ezi-2 ze-USB 2.0 (eyodwa ezisebenziseka njenge-SATA ene-adaptha), itheku elilodwa le-USB 1
I-OTG, i-1 micro USB 2.0 port yokulungisa amaphutha nokushaja.
Izinzwa - Accelerometer; i-gyroscope; ingcindezi nomswakama inzwa
Okuxubile: ama-RGB LED alungiswa ngokuphelele wezaziso, imoto yokudlidliza
Ibhethri: 6000 mAh
Ubukhulu: 139 x 87 x 32mm
Ngenkathi ngasohlangothini lwezingxenyekazi zekhompiyutha kubukeka kuphelelwe yisikhathi zedivayisi engafikanga kwaze kwafika u-2021, ikakhulukazi iprosesa yaseTexas Instruments OMAP 5432, eyiphedi eyi-dual-core ARM Cortex-A15 enehluzo zePowerVR SGX544. I-MP2 ekhishwe okokuqala ngo-2013.
Kodwa futhi kukhona ezinye izinketho zokumisa nezentengo zePyra, ukuphela kwemodeli ye-4GB etholakala ngoku-odwa ngaphambili kwe- $ 626 (ngaphandle kwentela).
Kumele kuqashelwe ukuthi ngenkathi iPyra itholakala ukuthengwa, iyidivayisi eyenzelwe ukuthi isetshenziswe ngabantu abathanda i-Hardware futhi ingahle ingalungeli wonke umuntu.
Futhi ngenkathi intengo ephezulu kungenzeka ibe yinkinga kwabanye, iPyra iyisetshenziswa esenziwe ngokwezifiso kakhulu, esinezinto ezishintshanayo.
Okokugcina kulabo abanentshisekelo yokuthola le khompyutha ephaketheni, bebengakwenza kusuka isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Dragonbox Pyra Pocket Linux PC isiyatholakala
Kwamandla wezindleko i-AMD Ryzen V1xxx bekungeke kube ngcono
Iqiniso ukuthi, ngaleyo ntengo, ngiyazithengela i-laptop, angazi ukuthi labo bantu bacabangani ngeqiniso, ngibona ikusasa elincane kakhulu lale phrojekthi, kepha bazokwazi ...
Angazi, bazocabanga ukuthi ngenxa yokuthi ivulekile i-sourse banelungelo lokuhlaba isikhwama sakho, ngokufanayo, namuhla kwi-laptop ephethe cishe bonke abashayeli bamahhala
I-CUSL: I-Free Software University Contest - Uhlelo lwe-15 luyaqhubeka